About Us - Tianjin Shengxin Sports Iimpahla Co., Ltd
Tianjin Shengxin Sports Iimpahla Co., Ltd yasekwa ngo-2011, nto leyo ezizodwa ekuyileni kwanokwakha neendawo emidlalo, yaye mveliso izixhobo qete yangaphandle, nebala lebhola ekhatywayo ebuhlanti, multi-njongo ibala, izixhobo wesikolo ezemidlalo, efundisa izixhobo, yima yomnyazi, ibhola yevoli post, iposi Badminton, iposi intenetya, ngaphandle wocingo ekukhuseleni nebhanti yodwa. Kwakhona ukuvelisa zonke iintlobo izixhobo ezingekho semgangathweni njengoko isicelo abathengi '. Ngoku Shengxin iye yaba ubulungu China zemidlalo Iimpahla Federation (CSGF), China zokubhala & zemidlalo Iimpahla Association (CSSGA), China Educational Izixhobo Industry Association (CEEIA), Tianjin zemidlalo Industry Association (TSIA), kwaye kananjalo iyunithi umlawuli we School zemidlalo isixhobo Branch Association in CEEIA kunye zemidlalo equipment neKomiti Professional e TSIA. UMphathi Jikelele Zhang Junyuan watyunjwa umlawuli esisigxina TSIA.
Emva kweminyaka 7 asakhasayo, Shengxin Imidlalo ibe yinkampani nempembelelo ngesiTshayina Industry izixhobo qete. Ngoku, indawo yethu umthamo Imboni kwindawo yokuqala in China. Lo matshini izixhobo ivelisa kwinqanaba ephambili shishino. ngoku enye Top iinkampani ezili-10 apho afumane isiqinisekiso NSCC yaye kwinqanaba ephambili Tianjin na. Okwangoku, iimveliso zethu NSCC nezabelo phezu 100 leyo kwinqanaba emantla kwiinkampani isiqinisekiso NSCC phezu 40
Uphuhliso olukhawulezileyo shishino iimpahla zemidlalo kunikeza ithuba lokuba Shengxin Sports. imali yethu ngo-2017 kwiintengiso sele RMB ezingaphezu kwe-100 lezigidi. inkampani yethu izicwangciso ukukhawulezisa ubeko kushishino, ukwandisa imveliso series kakhulu ukwandisa ingeniso ukuthengiswa 2018-2020.
Siye zigqityiwe ngo-2018:
1.INQANABA up umgca yemveliso, indawo yemveliso 20,000 square metres. Umthamo unako ukufikelela iziqwenga 180.000, ixabiso output izigidi 180 RMB.
2line wakha nezityalo izixhobo qethe yangaphakathi nga kufikelela kwizigidi eziyi-60 ixabiso yemveliso kunyaka wokuqala.
3. Ukutyal 3 million RMB nyaka ngamnye ukuze basebenzisane kunye eliphambili Iqela Taiwan RD ngenxa ukuphuhlisa manqaku entsha imveliso qete zangaphakathi nangaphandle, nto leyo kakhulu zisiqinisayo nkampani ngayo ukuyila, imveliso kunye innovating.
4.Built iqela inkonzo abantu abangaphezu kwama-20 emva kokuba-yokuthengisa ukuvumela distributers simahla ukusuka ukukhathazeka kunye abathengi qiniseka.
5.Introduced elizeleyo oluzenzekelayo welding iirobhothi-axis zithandathu ungaziphumeza i welding 360 degree ngaphandle engile abafileyo kunye ukuvala oluzenzekelayo. Lo matshini uyakwazi ukufikelela 100%. Kwakhona savelisa izixhobo zangaphambili njenge eyahlukile oluzenzekelayo odlulayo kabini-neentsimbi ukutshiza umgca ukupeyinta flow, wokwamanani umbhobho ulawulo ukusika Umatshini, umbhobho ulawulo lwamanani ukugotywa umatshini njalo njalo. Zonke ezi izixhobo phambili ngokucacileyo ukuphucula iimveliso kumgangatho ophezulu nokuba nemfezeko yemveliso ukwehlisa iindleko zemveliso.
Ke kaloku, utyalo-mali lwethu zizonke million 125 RMB (hayi ziquka umhlaba kunye nokwakha workshop). Igalelo okuqingqiweyo RMB million 60, ikomkhulu yangoku million 65 RMB.
Kwiminyaka elandelayo, okokuqala, sifuna ukuphuhlisa iimveliso abakrelekrele ngokusebenzisa ukuphanda okanye avelise. ukulidla Not kuphela imarike lokuthenga bulk, kodwa kwakhona ukufumana abathengi eziqhelekileyo umdla uye emizalwaneni eziqhelekileyo. Okwesibini, sifuna ukuba nenxaxheba kuqoqosho ukwabelana ukuya ngokubanzi nangokunzulu ukwabelana bonus eyi-nkqubo imfanelo wesizwe. Nethemba tyhala Internet, ilifu ikhompyutha, idatha big, i-Internet into nokufanela yesizwe asakhasayo kunye, makhe ubugcisa ukuncedisa ukomelela yesizwe.
Lwethu ucwangciso iminyaka emithathu ngu njengezixhobo:
2018, ingeniso intengiso million 180 RMB, ingeniso 30 million RMB;
2019, ingeniso intengiso million 300 RMB, ingeniso yezigidi 50 RMB;
2020, ingeniso intengiso 500 million RMB, ingeniso 100 million RMB.
Siya kuba kwinqanaba ehamba emva ekuphumezeni ithagethi!
NgoSeptemba 2017, Shengxin Sports ibiba Tianjin Youfa Steel Pipe Group, leyo yenye 'Top 500 Enterprises Chinese "ngaphezu kweminyaka eli-12, ukwakha Shengxin Sports ezintsha kunye. Intsebenziswano uphucula ukwakhiwa mveliso omtsha yenkampani, izixhobo intshayelelo kunye neemveliso ezintsha ezintsha nophuhliso.